नेशनल माइक्रोफाइनान्सको संस्थापक शेयर आजदेखि लिलामीमा, शेयरमूल्य कति ? - नेपालबहस
नेशनल माइक्रोफाइनान्सको संस्थापक शेयर आजदेखि लिलामीमा, शेयरमूल्य कति ?
| ७:०२:३५ मा प्रकाशित
२७ जेठ, काठमाडौं । नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयर आज (बिहीवार)देखि लिलामीमा आउने भएको छ।
कम्पनीले ८० हजार कित्ता संस्थापक शेयर लिलामीमा विक्रीमा ल्याएको हो । यस लिलामीमा शेयरमा आवेदकले असार १० गतेसम्म बोलपत्र पेश गर्न सक्नेछन् । शेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता १ हजार २२ तोकिएको हुँदा सो वा सोभन्दा बढी मूल्य अंकित गरी बोलकबोल गर्नुपर्नेछ ।
शेयर खरीदको लागि बोलकबोल गर्दा न्यूनतम १ हजार कित्ताको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् भने अधिकतम शेयर सख्याको लागि कुनै हद नलाग्ने कम्पनीले बताएको छ ।
सबैभन्दा पहिला विद्यमान संस्थापकहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिई बोलकबोल गर्ने आवेदकलाई शेयर विक्री गरिने छ । यसबाट पनि शेयर विक्री हुन बाँकी रहेमा अन्य व्यक्ति,कम्पनी,संघ,संस्थाहरु बीच बढी कबोल गर्नेलाई विक्री गर्ने कम्पनीले बताएको छ ।
बोलपत्र असार ११ गते विक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल नारायणचौर नक्सालमा बिहान ११ः३० बजे खोलिने छ ।
नेशनल माइक्रोफाइनान्सले संस्थापक शेयर बिक्रीमा ल्याउँदै १ महिना पहिले
लघुवित्तको लिलामी शेयर भर्ने आज अन्तिम दिन १ महिना पहिले
नेशनल माइक्रोफाइनान्सको लिलामी शेयर भर्ने आज अन्तिम दिन १ महिना पहिले
नेशनल माइक्रोफाइनान्सले संस्थापक शेयर बिक्री गर्दै, प्रतिशेयरमूल्य कति ? ३ महिना पहिले
यी हुन् माओवादी केन्द्रबाट निश्काशित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु ५ मिनेट पहिले
आज बजारमा कतिमा भइरहेको छ सुनको कारोबार ? १४ मिनेट पहिले
राइफल पड्किएर ड्युटीमै रहेका सेनाका जवान घाइते २२ मिनेट पहिले
रक्तचापको श्रेणी कसरी थाहा पाउने ? २७ मिनेट पहिले
तुलसीपुर बजारमा छाडा छोडिएका चौपाय ३५ मिनेट पहिले
ईन्सुलीन लिदै हुनुहुन्छ ? ध्यान दिनुहाेस यी कुराहरू ३६ मिनेट पहिले
धिताेपत्र बोर्डको ‘एक्सन’ पछि बजारमा आएको पहिरो रोकिएन ३८ मिनेट पहिले
पहिरो पन्छाएर मर्मतका लागि श्रमदान गर्दै ३८ मिनेट पहिले
निर्माणाधीन आधुनिक बागलुङ बसपार्क ४४ मिनेट पहिले
पक्की पुल नभएपछि अस्थायी पुलबाट आवतजावत ४७ मिनेट पहिले
पशुपालनबाट आयआर्जन वृद्धि गराउन ‘एक घर एक पशु बीमा’ कार्यक्रम लागू ५२ मिनेट पहिले
सुनकोशीमा तीन जनाकाे बेवारिसे शव भेटियाे ५ दिन पहिले
भिरबाट खसेको ढुङ्गा लागेर एक पैदलयात्रीको मृत्यु २४ घण्टा पहिले
महानगरमा एकै दिन ९ सय ५७ जनाको एन्टिजेन परीक्षण ३ हप्ता पहिले
स्वास्थ्यकर्मीलाई एकमुष्ट कोराना भत्ता दिन्छौं : मुख्यमन्त्री शाही ३ हप्ता पहिले
अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस ग्वाटेमालामा २ हप्ता पहिले
डा.देवकोटाको शपथ हुँदै ३ हप्ता पहिले
उपत्यकामा ‘सिजी इन्टरनेट’ सेवा शुरु ३ हप्ता पहिले
गौतमबुद्ध विमानस्थलको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न १ वर्ष पहिले
‘सेभ द अर्थ’ सुनसरीको संयोजनमा वृक्षरोपण सम्पन्न १२ महिना पहिले
नगरपालिकाद्धारा अस्पताललाई अक्सिजन सिलिण्डर सहयोग ४ हप्ता पहिले
लोमसका दुई औषधि माथी प्रतिबन्ध ११ महिना पहिले